Isilumkiso esiBomvu 2 kwiVR ngamava nje amnandi e-psychedelic | Iindaba zeGajethi
Isilumkiso esiBomvu 2 kwiVR luhambo oluhle lokubuyela kumdlalo odumileyo
Xa sithetha ngento yokwenyani evula iingcango zezinye iindawo zehlabathi kunye nezinye iindlela zokuya kwezinye iindawo, ayisiyiyo le nto kuthiwa ayithengisi umsi, kodwa kunoko ukuba ngumhla owuvavanyayo, nokuba usuka kwi-HTC Vive, uyaqonda ukuba loo magama asenokude asilele Ukuchaza zonke iimvakalelo ezisilindeleyo ngeVR.
I-HTC Vive ngamava okwenyani okwenyani kwaye iyafana nathi sinike uhambo oluhle ngeSilumkiso esiBomvu 2, Olunye lweyona midlalo ilungileyo yexesha lokwenyani yexesha lonke. Nokuba awuyongxaki yezi ntlobo zemidlalo, xa ujonga ividiyo apho ibonisa khona, uyakothuka.
Kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokusibuyisela kumdlalo weqhinga ngamava ka-rInyaniso yokuba i-HTC icebisa ngeVive yayo. Njengoko ubona kwividiyo ebonisa lo mdlalo uvuselelwe ngokupheleleyo kwinyani yokwenyani, inyani elula yokulawula ibala ledabi ngokwembono enye, ngokungathi singuthixo olawula la majoni mncinci kunye nezo tanki, sele ikho kwimeko entle kwaye iphantse yaba yindawo ye-psychedelic yabo bakha badlula kwi-Red Alert 2.
UAdam Horvath, umphuhlisi kunye nomdlali weqonga, uthathe iprojekthi kutsha nje kwaye wenza uhlobo lomdlalo isebenza nge-Unreal Injini 4. Iye yakwazi ukudibanisa umdlalo weqonga kwinyani ebonakalayo kunye neHTC Vive ukuze ulahleke kwelo hlabathi livula phambi kwamehlo akho.
Umdlali ngu iboniswe ngethebhulethi ebonakalayo enokusetyenziselwa ukukhetha izakhiwo kunye nezinye iiyunithi ezinokubekwa kwimephu yomdlalo nesikhombisi se-laser kwicala lasekunene. Konke oku kuyenzeka ngelixa ubekwe kwindawo ephezulu ngokwaneleyo ukuba unombono omkhulu wedabi.
Okwangoku, umdlalo isebenza kuphela njengengqondo, ke asinasiqinisekiso sokuba kukho ingxelo epheleleyo yayo. Enye into kukuba abaphathi boBugcisa boBugcisa bajonga umxholo kwaye bayenze inyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isilumkiso esiBomvu 2 kwiVR luhambo oluhle lokubuyela kumdlalo odumileyo
I-Nintendo Classic Mini NES ithengisiwe kwaye uqikelelo luyaqala
IOS ikuvumela ukuba uhlawule ngePayPal ngokuthetha noSiri